Ebee ka ndị ọbịa Pịa na Blog? | Martech Zone
Anyị na-arụ ọrụ na ụdị ọhụrụ nke Martech ruo nwa oge. Anyị ka nwere ụfọdụ ihe mgbochi iji merie ka anyị na-agbanwe nhazi nke ugbu a ka ọ bụrụ usoro mmekọrịta mmekọrịta nke dị mfe iji maka ndị na-ere ahịa ịchọta ma nyochaa nzụta teknụzụ ha na-esote.
Otu n'ime ule ndị bụ isi anyị mere na nkwadebe bụ iwepu ụdị ọchụchọ ahụ (anyị nwalere ọchụchọ WordPress na nchọta ọdịnala nke Google) wee dochie ya na Algolia, nyocha dị ka azịza ọrụ nke na-enye ma nlele onyogho na autosuggestions. Ga-ahụ n’okpuru na mbugharị ahụ bụ mmeri - na-emepụta ọtụtụ njikọ aka, na-abawanye peeji nke anyị kwa nleta, na mbenata ọnụego anyị.
E wezụga itinye n'ọrụ nchịkọta, ọ dị mkpa na anyị soro ebe ndị ọrụ anyị nọ na ịpị ma hụ na ha na-eji igbe ọchụchọ anyị. Iji mezuo nke ahụ, anyị debara aha iji Egwurugwu. Crazy Egg na-enye ihe ngosi anọ pụrụ iche ị nwere ike ime na ibe ọ bụla nke saịtị gị - yana ohere ịnwale mkpanaka mkpanaka.
Crazy akwa akwa
Crazy Egg Confetti (Egwu Crazy Egg)
Nke a bụ ngosipụta nke ndị ọhụụ (uhie) na ndị bịara abịa (ọcha). Nkwupụta confetti ahụ ga-akụkwa mkpanaka, mbadamba, sistemụ arụmọrụ na ozi mkpebi.
Crazy Egg Akwụkwọ mpịakọta
Anyị nwere ọrụ ụfọdụ ị ga - arụ na nke a - ọ dị ka etinyere akwụkwọ ozi anyị bụ isi, mana ndị ọbịa anaghị ahụ ezigbo ihe kpatara ịgbada. Anyị ga-arụ ọrụ na ịnyekwu kọlụm nke ozi yana otu ndakpọ nke posts ọhụrụ.
Tags: algolianyocha blogpịa machiekọnetti mapara na-agbaiheanachookpomokumachiempempe akwụkwọChọọ Marketingnyocha anya
Ọrụ Site na Home Mama
Nov 11, 2007 na 3:55 PM
Commentza ajụjụ bụ otu n'ime ihe ndị na-eme ka blọọgụ dị irè ma ọ bụ ezie na ị na-ahụ ka ndị mmadụ na-agbanye okwu ma ọ bụ na-agba ndị ọbịa ume ịza ajụjụ. O doro anya na ị ga-enweta ntakịrị spam mana enwere ụfọdụ nkwụnye okwu spamming na-ekwu nke na-arụ ọrụ nke ọma maka m.
Echere m na m gbalịrị ịwụnye Crazy Egg obere oge mana enweghị chi, enwere ike ịnwe oge ọzọ m chere.
Nov 11, 2007 na 6:26 PM
O doro anya! Emere m nyocha nke ịza ajụjụ na ọ nwere mmetụta na blọọgụ m ma chọpụta na ịza ajụjụ bụ otu nnukwu ngwá ọrụ m iji dọta ndị na-agụ akwụkwọ.
Agbalịrị m ịwụnye ClickHeat ma enweghị m ike ịnweta ya ka ọ rụọ ọrụ mana CrazyEgg yiri ka ọ na-eme nke ọma.
Nov 14, 2007 na 9:22 PM
Daalụ maka biputere ozi a. Aga m ele anya Crazy Egg. Ee, ekwenyere m na ịchọta ihe na blọọgụ na-akpali akpali. Anaghị m eche banyere ya na blọgụ nke m tupu oge a. Nọgide na-ezipụ ozi dị ukwuu nke na-enyere ndị ọzọ aka!